Ampiharo amin-dRajoelina ny satan’i Cotonou – MyDago.com aime Madagascar
Nitohy teny amin’ny kianjan’ny finoana Magro Behoririka androany nyhetsiky ny mpomba ny Ankolafy Ravalomanana. Toy ny mahazatra dia nisy hatrany ny fifandimbiasam-pitenenana nataon’ireo mpitarika. Ny Ct Tsianihy dia nilaza fa apetraka mazava tsara fa ny zavatra tapaka tany Dar Es Salam dia mety amin’ny zanak’I dada. Tsotra hoy izy ny antony dia afaka mody ny filoha Ravalomanana Marc ary anjarantsika ny mifidy azy. Mahazo milatsaka mazava tsara izy ka noho izany dia tsy tokony hiroaroa saina isika. Ny Ni.. Ni.. hoy izy dia tsy mipetraka amin’ny filoha Ravalomanana Marc fa amin-dRajoelina satria izay noho ao amin’ny satan’I Cotonou. Ny Ct Raveloson Constant kosa dia nanambara betsaka ny mitebiteby satria efa notsofintsika teto izany Ni.. Ni.. izany kanefa mbola manangatra ihany. Mety fomba iray hoy izy hampivaha ny olana raha misy mandresy lahatra an’izy roalahy tsy hirotsaka. Miarahaba anareo fa nahavita dingana isika dia foana izay ny fanakatsakanana ny fodian’ny filoha Ravalomanana Marc. Menatra eo ny Sadc hoy izy raha tsy hanatanteraka izany. Ny zavatra mahafaly dia romotra izy ireo. Ny antony dia tsy misy fepetra ny fodian’I dada. Voalazan’ny Sadc fa aoka esorina izay lalàna manakatsakana olona tsy hody an-tanindrazany. Tsy maintsy misydingana hoy izy ny tolona ataontsika. Ry zareo milaza fa raha misy maharesy lahatra azy roalahy tsy hilatsaka fa ny anjarantsika kosa dia ny mandresy lahatra ny vahoaka hoe tsara sy milamina raha mirotsaka ny filoha Ravalomanana Marc ary hampivaha ny olana izany. Noho izany dia nanentana ny vahoaka ny tenany mba samy hampita ny vaovao any amin’ny isam-pokontany tsirairay any. Nambarany fa tsy adika ny voalazan’ny Sadc ny tenany fa mbola ho avy eo rahampitso ireo mpitarika izay nanatrika mivantana izany tany an-toerana ahitana ny filohan’ny Ct Rakotoarivelo Mamy sy ny filoha lefitry ny Cst RazafimanantsoaHanitra. Ny Ct Ravelonanosy Mamitiana dia nanambara fa tadiditsika fa ingahy Rajoelina dia niketriketrika hanao politika. Tany Seychelles izy dia nangataka fa ajanona ny fitsarana ny filoha Ravalomanana Marc raha tsy milatsaka. Mazava hoy Mamitiana ny voalazan’ny Sadc ao amin’ny andininy faha 7 sy 4 fa tsy maintsy atao ny aministia faobe fa izany dia tombontsoa amin’ny fodian’ny filoha Ravalomanana Marc. Nambarany ihany koa fa hetsika lehibe rahampitso sy afak’ampitso eto an-kianja ataon’ny Ankolafy Ravalomanana izay tafiditra ao anatin’ny fankalazana ny tsingerintaona nahaterahan’i Dada. Tongava maro hoy izy hanatevin-daharana ny tolona.
Auteur Solo Razafy*Publié le 10 décembre 2012 11 décembre 2012 Catégories Politique
10 réflexions sur « Ampiharo amin-dRajoelina ny satan’i Cotonou »
Dia samy ho tratry ny Rahampitso daholo aza e!!!
Hay rahampitso izany dia efa hiantso mivantana i Dada,
Dia hangaiay eo indray ny LAINGA MARIVO TOTOTRA.
Ary i ( aleo tsy lazaina fa mandreraka be)
Ô Ramatoa, nahoana aho no dia amporisihanao hamingana ny Tena Tompon-toerana ê ! Ankaherezo aho hanohan’azy atramin’ny farany !
Tandremo mikawitry izany rahampitso, sao dia mahazo « banana mislipy » any !
Koleo sereo ! KOLEO ZE OMANA !! Miafara amin’ny 4MI ‘ty zavatra ity ! MDR !
Efa nazavaiko kosa ny antony e!!azafady ary e!
Mila olona ohatra anao mihintsy GASIKARA KINTANA a!
Tena tsy vazivazy, raraka mihintsy ny iviko namaky n zavatra nosoratanao »
Tohizo dia ampianaro ny ankizy fa tsara, dia aza kivy @ fanavoatana ny
Tanindrazantsika.MANKASITRAK I BAVY e’!HO ELA VELONA LESY a!
Dia enga anie mba hanaranaka hatrany @ zafy………..lavitra rehetra any.
zavabita dit :
Efa feno hipoka @izao fotoana hanoratanay izao, ny kianjan’ny zavakanto coliseum Antsonjombe handray sy hihoby ny filoha mahavita azy Andry Rajoelina. Lotika sy mivonto fo ny zanakidada, ary misy ny tsy maintsy hihazakazaka eny hiara-paly amin’ny vahoaka. Raha hampitahaina ireto olona ao magroreraka kely ireto, sy ny halehiben’izany fety be izany, ary ny vahoaka hanatrika eo hihoby ny prezidan’ny malagasy Rajoelina, de mampitaha ny lalimanga Rainivoanjo @ lolomboasary marevaka. Mitaintaina mafy Rainivoanjo, fa tsy niantohan’ny SADEC ny fodiany. Ny vahoaka sy ny fianakavian’ny olona novonoiny koa efa miandry azy, miampy an’i R-Bombe henjana be. Handroso Rinivoanjo mpandositra maty renibe, hihemotra maty renibe. Mafy be nenay zandry iny a! tsy laitran’iza n’iza, na de ireo DICTAT be ao @ SADEC aza hihomezany fotsiny. Atao ahoana koa, moa ny haka partie @n-dRajoelina, manjary manome lesona ny jeunes eran’ny Afrika mitolona manongana ireo DICTATEURS mamikitra eo @ sezany @ fanitsakitsahana ny zon’olombelona sy ny demokrasia. Tsy zakan’ny tsenan’ireo mantsy, raha toy izao nahazo ny dictat Raosy izao no hahazo azy koa raha mihetsika ny jeunes te handray ny fitantanana ny tanindrazany, izay giazan’ireo dictateurs be tsy mety miala ireo. De mandehana aloha mba manala azy kely eny Antsonjombe mba mandray lesona mijery ny zavabitan’ny olona ry zanakidada raha tsy manakatao afatsy ny wawawa ao @ magrobaka ao a!
n’empechez pas nos enfants de venir grossir les rangs à Tsonjobe car il n’y a personne là-bas;alors que magro est plein à craquer!de tte façon c’est dada qui a construit ce kolizeoma!
bcp ont prié les dadarabe pr que les foza soient noyés par la pluie ce jour!mais il n’en est rien!Dieu est avec ces foza
lobservateur fángaha tara sambo tena no tsy lasa any Antsonjombe sa tsy nahazo fanasana tahaka ny ben´ny foza koa , maimbo fozy ny fetin´Ántsonjombe.
11 décembre 2012 à 20 h 36 min
Henoko hatr’aty mihintsy ilay fofona MIsajaona a!!!
Eto @ Mydago hihihiiiiiLatsaka mihintsy aho!!!!
Ilay « e » ve sisa no manelanelana ? Ianao ‘ty ranavalona an ! Tandremo ihany ry Misajaona ity rantsatanana mibolila ity â !
Miresaka latsaka ihany ! Hilatsaka ve hono ilay domelina sa tsia ê ?
Ary toa tsy nasiana resaka be ilay anniversaire ? Ny fianarana katôlika hono toa tsy nihidy, ary nianatra daholo ny ankizy ?
Izay angaha vao tonga saina ry damôpra isany, fa tena olona tsy manjary ity notohanan-dra Odon ? Sa vokatry ny felaka azony tany amin’i Rabenoâ ilay izy ?
Aiza ka rafozam-bavy vao tsy ela no dangy, dia iny ilay vendrana no tsy menatra akory « mitakosina » amin’ireto sokatry be ! Tsss !!!
Précédent Article précédent : La SADC n’imposant pas le « ni-ni »
Suivant Article suivant : ME RAZAFIMANANTSOA HANITRA : MODY NY FILOHA RAVALOMANANA MARC ARY MANGATAKA AZY HILATSAKA HOFIDIANA NY VAHOAKA